HomeDUNIDAAasiya86 ShiinahaMashruuca Wadada Jiilka, 40 si Badbaadinta Malaayiin Dadka Looga Siiyo Saboolnimada
06 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 86 Shiinaha, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY 0
mashruuca jiilka ayaa ka badbaadin doona malaayiin dad ah saboolnimada
Marka loo eego daraasad ay daabacday Baanka Adduunka, hindisaha Shiinaha iyo 2013 ee ay soo bandhigtay barnaamijka 'Generation and Road Initiative', 7 milyan oo 600 milyan oo dad ah oo ku nool dalal aad u xun, 32 milyan oo qof ayaa ka takhalusi doona saboolnimada dhexdhexaad ah. Dadaalku wuxuu sidoo kale kordhin doonaa 2,8 illaa 9,7 boqolkiiba mugga ganacsiga ee waddammada ka qaybgalaya. Ganacsiga caalamiga ah, 1,7 illaa 6,2 wuu sii kordhayaa dakhliga adduunka ayaa kor u kici doona 0,7-2,9. Ilaa maanta, waddamada 136 waxay saxiixeen inay kaqeybqaataan dadaalkan…
Cumhurbaşkanı Silk Road Economic Belt ”iyo“ 2013., Oo uu qaabeynayo Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping inta lagu gudajiray booqashadooda Bartamaha Aasiya iyo Koonfur Bari Aasiya deyrta 1. 6 wuxuu noqday badeecad guud oo lagu soo dhoweeyay heer caalami ah.
Hindisahan, kaas oo Xi Jinping uu si gaar ah fiiro gaar ah u siinayo dabaaldegyada sanadguurada 70 ee Shiinaha, wuxuu sii xoojiyay is aaminaadda siyaasadeed, wadajirka dhaqaale iyo xiriirka aadanaha iyo dhaqanka ee ka dhexeeya dalalka ay quseyso.
Ilaa dhamaadka bisha Luulyo, 136 waxay heshay tirada wadamada saxiixay shahaadada iskaashiga ee ay la leeyihiin Shiinaha iyada oo loo marayo qaab dhismeedka Jiilalka iyo Wadada; tirada ururada caalamiga ah waxay ku kordheen 30. Mashruucu wuxuu kaloo u qorey qaraarada qaramada midoobay marar badan cinwaanka 'In Dhisida iskaashiga aayaha bina aadamka'.
Turkey si fiican u taagan tahay qalbiga mashruuca
Iyaga oo la kulmay sheegashooyinka kala duwan ee wadamada reer Galbeedka, Belt iyo Wadashaqeynta Wadada, Bariga Afrika, Wadada ugu horeysa, Maldives oo ah buundada ugu horeysa dhanka Badda, Belarus waxay leedahay wax soo saar gaarigeeda. Soo bandhigista wadada tareenka ee isku xirta Mombasa iyo Nairobi ayaa ku biirisay dhibco 50 ah kobaca dhaqaalaha Kenya, iyada oo gobolka laga abuurey ku dhawaad ​​1,5 kun oo shaqo.
Turkey ee qaabka guud ee heshiiska saxiixay Shiinaha ee 2015 waxaa ka mid ahaa in Project Road Tacbatada. Macnaha guud, shaqooyinka mashruuca 'Çanakkale Strait Bridge,' 3 Storey Tube Crossing Project, Filyos, Çandarlı iyo Mersin dekeda dhismaha iyo tareenka xawaaraha sare ee Edirne-Kars iyo iskuxirka isku xirka wadooyinka ayaa sii soconaya.
Mashruucu wuxuu higsanayaa inuu isku xiro Aasiya, Afrika iyo Yurub; Tan waxaa ka mid ah maalgalinta balaayiin doolar oo lagu sameeyo kaabayaasha, oo ay ku jiraan wadooyinka waaweyn, jidadka tareennada, dekedaha iyo khadadka gudbinta awoodda. 21. qarnigii oo loo aqoonsaday inuu yahay mid ka mid ah mashaariicda horumarineed ee ugu weyn ee leh isku-xidhka Belt iyo Road; dhismaha iyo is-dhexgalka gadiidka, isgaarsiinta, tamarta iyo shabakadaha kale ee kaabayaasha ee gobolladan, fursadaha amaahda iyo raasamaalka ee mashaariicda cusub, kastamyada iyo isuduwidda canshuuraha ee udhaxeysa gobollada iyo fursadaha ganacsiga iyo maalgashiga ayaa la rajeynayaa in dib loo soo nooleeyo.
Mashruuca Baaskiilka iyo Wadada 25 / 05 / 2019 Mashruuca Belt iyo Road: Turhan wuxuu ka qaybqaatay Shirarka Caalamiga ah ee Gaadiidka (ITF) ee Leipzig, Jarmalka wuxuuna ka jawaabay su'aalaha ajandaha. Turhan, Turkey, duubanayaan ayaa lagu wadaa hawlaha waaxda gaadiidka waa xubin ka mid ah tan iyo markii, iyo qabsadey muhiimadda ugu weyn ee shirka, ayuu yidhi. Wuxuu xusay in mawduuca mawduuca ee goluhu uu yahay furitaanka wadooyinka gaadiidka, Turhan wuxuu sheegay in uu xiriir muhiim ah ka dhex sameeyey munaasabadda guddiga iyo in uu sheekooyin ku saabsan gaadiidka, dhijitinta iyo is-beddelka tamarta. Turhan ayaa hadalkiisa sii wata: "Sannadihii ugu dambeeyay ee 15 ee dalkeena, waxaan fulinay mashaariic aad u muhiim ah oo ku saabsan gaadiidka, waxaanu sharxay, kuwan oo daba socday qof walba." Furaha dhacdada Generation iyo Road ...
Mid ka mid ah Project Belt Road One Translate Danta of ganacsatada Shiinaha Turkiga 01 / 07 / 2019 Mashruuca Shiinaha ee tareenka bilyan oo dollar, taas oo bilaabay sidii 'a Generation Mid ka mid ah Jidka', jeestay dareenka ganacsatada Shiinaha Turkiga. Mashruuca tareenka sababtoo ah waa buundo oo kaliya Turkey ee Europe si ay u booqdaan ganacsatada Shiinaha bilaabeen inay maalgashi ku meelo badan oo dalka Turkiga. Bishii la soo dhaafay madaxweynaha shirkadda dhismaha la socda kun 40 dadka halka qabanayaan cilmi maalgashiga dalka Turkiga, Christmas yimid in maamulayaasha Soho Istanbul qabriga maryo. In group shakhsiyadda ganacsade ah 350 September 500-Chinese, waxaa soo socda dalka Turkiga si ay u baaraan fursadaha maalgashi. Koox Chinese ah khubarada keenay Turkey, ayuu yiri kooxaha sida aan ku mashquulsan yihiin mashaariicda bilyan oo dollar iyadoo mugga non-ganacsiga. Turkey ugu ka bishaan ...
Heshiiska Iskaashiga 118 waxaa lagu saxiixay Mashruuca Jiilka iyo Wadada 28 / 08 / 2018 Heshiiska Iskaashiga 118 ee Saxiixay Mashruuca Jiilka iyo Waddooyinka: Sanadkan gudihiisa, heshiisyada 5 waxaa lagu saxiixay wadamada wadamada 103 iyo ururada caalamiga ah iyo Shiinaha ee ku saabsan mashruuca "Generation and Road". Ning Jizhe, Madaxweyne Ku-Xigeenka Kooxda Hoggaanka ee Daraasaadka Dhismaha Wadooyinka iyo Wadooyinka, ayaa shir saxaafadeed ku qabtay mawduuca maanta ee magaalada Beijing. Tan iyo markii la bilaabay barnaamijka "Belt iyo Road", 118 waxa uu sheegay in horumar weyn laga sameeyay mashaariic dhowr ah oo wada shaqeyn ah sanadihii la soo dhaafay. Ning ayaa sheegay in dhismaha Waddada dhaqaalaha ee Sino-Pakistani ay si habsami ah u socoto, Ning ayaa sheegay in dhismaha Sino-Laos, Sino-Thailand iyo Tareenka Talyaaniga ay tahay mid deggan.
Anatolia 'hal jilaa hal waddo' 20 / 04 / 2019 Gaadiidka iyo Kaabayaasha Wasiirka Cahit Turhan, "Mid ka mid ah Belt One Road Project" oo muddo soo socda, annaga oo ogaaney in Turkey sii kordhin doonaa muhiimadda ay leedahay juqraafiga ay ka mid yihiin in "Anatolia, Caucasus iyo Central Asia gaadiidka xagalka ah ee mudada dhexe si ay u gaaraan badan a of size dhaqaalaha ee hadda." ayuu yiri. Wasiirka Turhan, ayaa sheegay in war qoraal ah oo, sannadihii la soo dhaafay 17, koritaanka record Turkey ee deg deg ah, soo-saarka dhoofinta-oriented iyo sii wadi doonto in la kordhiyo mugga ganacsiga ay. Waaxda gaadiidka ee Turkey, Azerbaijan iyo Bartamaha iyo gobolka South Asia si ay u kicin ganacsiga Turhan sharaxay in qalabka ugu muhiimsan, adkaynaya in la keeno codka ee dareenka caalamiga ah ee tallaabooyinka loo qaaday ee ku yaala goobahan. Turhan, ...
Hantida iyo Wadada 'Win-Win' 23 / 05 / 2019 Gaadiidka iyo Kaabayaasha Wasiirka M. Cahit Turhan, New Silk Road, sidoo kale loo yaqaan ee Belt iyo Road Girişimi`N, Asia, Europe, Africa iyo xataa South America by xiriirinaya ujeeddooyinka, oo sheegaya in ay qiimeeyo sida hindise aad ugu muhiim "initiative ku lug leh in ka badan dalalka xnumx't adduunka oo dhan, waxaa jira mashruuc aad u weyn, oo daboolaya aag of 65 bilyan oo ka mid ah dadka dunida iyo saabsan 40 million kiiloomitir oo laba jibbaaran. Sababtan awgeed, aad ayey muhiim u tahay wadamada ka faa'iideysanaya iskaashiga labada dhinac, dhinacyo badan iyo mid goboleedba, si ay u xaqiijiyaan hindisahaan iyada oo la eegayo fikradda guushu ku guuleysato. International Gaadiidka Forum ka dhigan Wasiirada ee Turkey Turhan (duubanayaan), Germany ee ...
Waxa ugu xiisaha badan mashaariicda badbaadin doona Istanbul waa gaariga telefoonka ah!
Metrobus si loo badbaadiyo Istanbul waxaa lagu soo saaray Dresden, Germany
Hoyga Tunnels 10 ayaa badbaadin doona kharashka sanadkiiba